More woes for Zim at ITF tourney - DailyNews Live
More woes for Zim at ITF tourney
3 August 2012 8:57AM • 0 comments
HARARE - The duo of Courtney Lock and Tendai Tapfuma beat Francois Kellerman and Okkie Kellerman of South Africa 6-4, 6-2 in the International Tennis Federation South/Central African Junior Circuit singles quarter finals to register a rare victory for Zimbabwe at Harare Sports Club yesterday.
There was no joy though for Zimbabwe’s remaining player in the ITF South/Central African Junior Circuit singles category after Ronzai Saurombe tumbled out at the quarter-final stage to Namibian Tuki Jacobs.
The Manicaland Tennis Association Academy (Mantas) product was beaten 7-6 (3), 6-3 to end the host nation’s interest in the singles category.
The Zimbabwean doubles pair of Nicola Dzenga and Vimbai Ugaro were booted out by the Indian duo of Naenika Reddy Devireddy and Spurti Shivalingaih, who won 6-3, 7-6 (5).
The sad Zimbabwean story continued when Takudzwa Muswere and his South African partner Joshua Luck were out-fought by the doubles pair of William Bushamuka of Ivory Coast and Kenyan Ishmael Changwa Muzai, who prevailed 6-2,6-3.
Zimbabwe’s Thabile Tshatedi and her partner, South African Nicola Neil, could not halt the losing streak and fell 6-2,6-2 to the doubles pair consisting of Indian Rutuja Bhosale and South African Melissa